Igumbi le-Antwerp elineendawo ezintle onokuzibona. - I-Airbnb
Igumbi le-Antwerp elineendawo ezintle onokuzibona.
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguAnne Marie
UAnne Marie yi-Superhost
Ndihlala eflethini ngokwam.
Igumbi elinye elinegumbi lokuhlambela labucala nendlu yangasese nendawo yokungena kwintente enkulu. Kukho ukukhanya okuninzi neendawo ezintle onokuzibona. Indawo yokupaka.
Unxibelelene kakuhle kakhulu ne-Antwerp ubuninzi beemizuzu eyi-20. Ibhasi ime phambi komnyango .Tram okanye isikhephe ukuya embindini wesixeko.
Ukuhambahamba neevenkile zokutyela ezintle kufutshane. Igadi yabakhweli beebhayisekile. Izinto ezenziwa ehlotyeni: izinambuzane, ipuli evulekileyo nenemali ephantsi yokungena, ukunyuka intaba, iibhari zasehlotyeni, i-marina. Kulula ukudibana nebala leLotto kunye nebhotwe lezemidlalo.
Igumbi eliqaqambileyo elinekhabhathi enkulu. Igumbi libekwe kwiholo yasebusuku eyahlukileyo ukuze ingxolo kwigumbi lokuhlala ingaphazamisi. Ukuthula okuninzi ebhlokweni nangaphandle. Indawo eninzi yokupaka. I-Antwerp ibonakala kakuhle.
Kwisicwangciso esincanyathiselwe kuso ungabona ukuba leliphi igumbi negumbi lokuhlambela elilahlwayo londwendwe.
4.75 · Izimvo eziyi-158
Indawo ezolileyo . Uhambo luqala kwelinye icala: ukuya ehlathini okanye ukuya kwipromenade ecaleni kweScheldt. Ungahamba ecaleni kwe-Scheldt ukuya kwisikhephe senqanawa, isikhephe sebhasi, i-tram kunye netonela yabahambi ngeenyawo. Ngale ndlela ufika kwimizuzu emi-5 kwiziko elidala lesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Anne Marie
Xa ndirenta, ndizama ukubakho kangangoko ndinako. Iingcebiso ezisebenzayo zokundwendwela esixekweni nakwindawo ezisingqongileyo kunye nesikhokelo yinxalenye yezinto ezinokwenzeka. Ndiyathanda iincoko ezipholileyo kunye nokwabelana ngemibono. Kodwa ndifuna ukunika iindwendwe indawo eziyifunayo.
Xa ndirenta, ndizama ukubakho kangangoko ndinako. Iingcebiso ezisebenzayo zokundwendwela esixekweni nakwindawo ezisingqongileyo kunye nesikhokelo yinxalenye yezinto ezinokwenzeka.…